Indonesia in Focus: Ha dabaal Dhalashada Nabiga (Maalinta Dhalashada Nabiga) gaalnimo?
Ha dabaal Dhalashada Nabiga (Maalinta Dhalashada Nabiga) gaalnimo?
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (339)
(Qaybta saddex boqol iyo sagaal iyo soddon), Depok, West Java, Indonnesia, August 9, 2015, 14:45 pm).
Radio Rodja ayaa, Ustad Abu Yahya Badrussalam jawaabay su'aalo ka mid dhegeyste ee Radio in ay jirto tuulada kuwaas oo inta badan qaban dabaal guuradii of Muhammad Nabiga (Mawlid) No Ustad uu hadalka waa dersika iyo in kuwa aan dabaal Nabiga Dhalashada waa ka digayaan ah.
Abu Yahya Badrussalam wuxuu ku jawaabay, mana jiro mid ka mid ah qawl ee Quraanka iyo Xadiiska (Sunnah / al-xigmad) Nabi Muxammed oo wuxuu ina farayaa in ay u dabaal Nabiga Dhalashada.
Nabiga iyo saaxiibbadiis iyo Imaamyada, sida Imam Syafei, Imam Abu Xaniifa, Imaam Malik iyo Imam Hambali marnaba ahaa noo dhiiri u dabaal Nabiga Dhalashada.
Run ahaantii, waxaa ay u noqon culimada qaar ka mid ah oo sheegaya in dhalashada Nabiga uu si wanaagsan u abaabulan loo isticmaalo, laakiin wuxuu sheegay in Abu Yahya, war culimada ma loo isticmaali karaa sida qawl ah, laakiin waxaa loo isticmaalaa sida wax xuja ah oo ka mid ah Quraanka iyo Sunnaha, markaas culimada u ololeeya Mawlid waa lid ku dooda in ay tahay fal ee faasiqnimo (abuurta cibaadada cusub ngadakan aan qawl).
Caabudina kastoo asal ahaan waa xaaraan, haddii waxaa jiray amar ah inay sidaa sameeyaan ka ee Quraanka iyo Sunnaha, halka dhibaatooyinka adduunka ee (non-diimeed) ahaa asal ahaan la ogolaan karo (May) haddii Waxaa ka Reebban ah loo sameeyo sida cunista hilibka doofaarka, oo aan khamri cabbaynin (khamriga lagu sakhraamo), qiiq (sigaar cabbin tubaakada).
Nabiga Dhalashada xafladda ayaa sheegay in Abu Yahya waa caado in bilaabay Fatimid Bani ah (ee Shiicada) ee qarnigii shanaad. Marna ha sameeyo Muhammad Nabiga iyo saaxiibbadiis ah (Tabi-u hadha qarnigan ugu horeeyay ee qarniga afraad ah.
Dalka Indonesia ayaa Council (MUI) tan iyo Guddoomiyaha Prof.Dr.Hamka fatwa, in shiicada ee ku jira nidaam ah, waxaa jira 10 sababaha shiicada ee waxaa loo tixgeliyaa nidaam, iyaga ka mid ah saaxiibada mengkafirkan.
In kastoo Quraanka iyo Sunnaha na amrayaa in aan la noqon mengkafirkan qof, Ilaah keliya ayaa lagu helay dambi qof ama dad ah ee la soo dhaafay (tilmaamay in Quraanka).
Maxaa yeelay, sida sharciga Ilaah qof inkasta oo gaalo ku dhashay, laakiin ka hor inta uusan dhiman ayuu Toobad keena (iimaanka) Eebe, hadduu Eebe dooni inuu samada ku tegi karin, halka kuwii gaaloobay Eebe wuxuu leeyahay qof ayaa go'aamisay meeshiisii in cadaabta.
Halka lagu eedeeyay shiicada in asaxaabta Nabiga yihiin gaalada, laakiin Ilaah iyo Muhammad ayaa mar sheegay in nebiyo iyo rasuullo ka sokow, oo isaga saaxiibbadiis ah ayaa xaqiijisatay Ilaah u tag samada (sababtoo ah taqwada iyo iimaanka xagga Ilaah).
Wadaad A Saudi ayaa sheegay in uusan heli farcamaan kooxo kale ee Muslimiinta ah iyadoo la raacayo asaxaabta Ahl Sunnah wal jamaacadda marka laga reebo ka mid ah kuwa raacsan ee As-Salaf al-Saalax AlMunajjid Ahlul.
The Mu'tazilah sida u dhigma ayaa laga yaabaa in ay asaxaabta tirooyinka weyn halka ay cambaarayn tirooyinka weyn ee caddaaladda iyo hoos u saaxiib ku eedeeyay inay faasiqnimo sida Al-Wasil bin Atho 'taas oo dhigayaa: Haddii Ali, Az-Zubair Tholhah ka dibna ma aanan marag cadaabay sababta oo ah waxay marag. [Eeg Al-Farqu Bainal Firaq hal.119-120]
Kharijites ayaa ka soo baxday oo diinta iyo menyempal shirka Muslimiinta sababta oo ah qaar ka mid ah dhibcood aasaasiga ah ee ay Cilmigaygu waa mengkafirkan Ali iyo wiilkiisa, Ibn Abbas, Cusmaan, Talha, Ayesha iyo Mu'awiyah iyo ma waxa uu ku yaalaa on sifooyinka Ehelkeeda ah handadaad iyo iyaga mengkafirkan.
Sida Shufiyah, ay dhayalsan dhaxalka Nabiyada iyo waynno sannad gudbiye ee Kitaabka iyo Sunnaha mensifatkan ay sida qofka dhintay. Nin weyn waxay dhihi Waxaad aqoontaada qaadan, ee dhintay halka aan aqoon nolosha weyn oo ma dhiman (Ilaah) si toos ah noo qaado. Sidaa darteed, waxay is-odhan-afkooda in ay diidaan hadits- sanad: Miyuu oo qalbigaygiina waa i mengkhabarkan xagga Rabbiga.
Sida Shiites ah, wayna rumaysteen Ehelu ku lahaa garantiigu geerida Nabiga sallallaahu 'wa dad yar mooyee, arki Al-Kisyiy -one wadaadka lau tebinaysa taariikhda Rijalnya kiiska buugga. 12,13 ka Abu Jacfar, in uu yiri: DKMG oo dhammu waxay geerida Nabiga ka dib markii sallallaahu 'wa saddex mooyee, waxaan ku idhi: Waa ayo qofka saddexaad? Waxa uu ku jawaabay: Al-Miqdaad bin Al-Aswaad, Abu Dhar Al-Ghifary iyo Salman Al-Farisiy.
Qisadii in p.13 of Abu Jacfar, isna wuxuu ku yidhi, Muhaajiriinta iyo Anshor soo baxay (diinta) marka laga reebo saddex. [Eeg Al-Kaafiy shaqada ee Al-Kulaniy, hal.115]
Khumeyni ayaa sidoo kale arki ay -tokoh weyn waqtiga this- cambaareeyey habaaray Abu Bakr iyo Cumar in uu buugga Kasyful Asroor kiiska, 131, waxa uu sheegay, Runtii syaikhani (Abu Bakr iyo Cumar) ... oo halkan ka si aynu wax lagu qasbay in ay soo gudbiyaan caddaymo caddayn khaldama ay labadooda waa dad aad cad oo ku saabsan Quraanka si ay u caddeeyaan in labada lahaa menyelisihinya.
Oo waxay ku yidhaahdeen marka la eego mar kale of 137: ... iyo Nabiga indhaha (d) la xidhay halka labada dhegihiisa ma aflagaada on Ibn al-Khattab oo Wadda been iyo kufr laga kala dhaqanka, kezindikan iyo penyelisihan Aayaadkiisa ee Aayado ah ' sharaf daahay.
Sida Murji'ah, ay aaminsan yihiin in iimaanka ka mid ah kuwii Munaafiqiinta oo iimaanka ku jirtaan iyo isku kenifakan Assabiqunal Awalun (dadka ugu horeysay oo diinta islaamka) oo ka mid ah Muhaajiriinta iyo Gargaare.
Sidee oo dhan waxay u dhigmaan saaxiibada inta ay kala yihiin:
Mengkafirkan la doortay ka mid ah
Ha aqbalin oo dhan in ay ka Qisadii Nabiga sallallaahu 'wa in sharciga aqeedah iyo shareecada.
Raac ilbaxnimada Byzantine iyo Falsafadda Giriigga
Kooxahan oo dhamaantood doonaya inay ina diidi markhaatiyaasha in ay Kitaabka iyo Sunnaha dacweyneyno iyaga halka ay u badan yihiin kuwo istaahila in la caayo, oo waxay yihiin zindiq ah.
Sidaas darteed waxaa cad in fahamka ah ee al-salaf waxaa manhaj Firqatun Najiyah iyo Ath-Thaifah Al-Mansurah in fikradda waxgarashada, aqbalaadda iyo Istidlal (go'aanka sharciga ah).
Inkasta oo kuwa raacdo tusaalaha asaxaabta waa kuwa shaqada la sheekeysto (Xadiiska) waa sharciga Shareecada dalah dhab ah oo dhab ah, iyadoo wadooyinka iyo fahamka saaxiib, kanna waa inuu jidkiisa nolosha Ahlul Xadiiska, ma koorsada Ahl-ul-bid'ah iyo Xaawo. Sidaas run iyo ka xoogga leh waxa aan ku tilmaami markii ugu Caddaynaa ay guul ah qaab-dhexaadiyaan in Nabiga sallallaahu 'wa la guusha qofka soo qaaday sunnah sallallaahu' wa iyo Sunnah oo ka mid ah afar badala isaga ka dib.
Kaamil ah Islaamka iyo khataraha
Sheikh Muhammad bin Saalax Al-'Utsaimin
Mahad Eebaa iska leh Subhanahu wa Jannatul. Waxaan isaga ku ammaani, isaga oo dawarsanayay, Ma'unah iyo cafiyan yihiin, toobad iyo camalkiisa xun noo is xun isaga isku halleeya. Ciddiise laga siiyo tilmaamo Ilaah markaas waxba noqon kartaa marin habaabin, oo ku alla kii disesatkannya markaas wax menunjukinya karo.
Waxaan ka marag furaa in Ilaah wuxuu xaq u leeyahay in la caabudo Eebe mooyee, Wadaagana ma jiro, isagaana u. Oo anigu waxaan marag ka nahay Muxammad waa addoonkiisa iyo Rasuulkiisa. Waxa uu sallallaahu 'wa Ilaah laga soo diray isagoo hanuun wada iyo Diin xaq ah. Beliaupun ayaa fariin ah, fulisaan ah, daacad iyo jacayl dadka, oo ku jahaaday Jidka Eebe Xaq ilaa uu taktay Naxariistiisa, halka qoomkiisii isagoo wadada dhalaalaysa shiday, oo weecin ka hubaal halligmaysaan uu ka tagay.
Nabiga sallallaahu 'wa ayaa sharaxay dhan baahida dadka ee qaybaha kala duwan ee noloshooda, sida uu sheegay in ay Abu Dhar Radi' anhu: "Ma jiraan wax la iska fududaysto by Nabiga sallallaahu 'wa, ilaa shimbirta booska Garbihiisa oo cirka, laakiin waxa uu ayaa ina baray oo ku saabsan sayniska ".
Waxaa gaalada ka weydiiyay Salman Al-Farisi Radi 'anhu: "Ma Nabiga idin bara ku saabsan habka inuu cagihiisa qariyo .. Salman ku jawaabay:? Haa, wuu na mamnuuc ka fool Qiblada marka xaaridda, iyo nadiifinta oo ujeedadu ka yar saddex dhagaxyo , ama gacanta midig ama xaar la qalajiyey ama lafaha ".
Ilaah wuxuu u sharaxdo DIINTA EE Azhar IYO FURU QURANUL AL-KARIM
Waxaa hubaal ah inaad ogaadana in Eebe Subhanahu wa Jannatul ayaa sharaxay Quraanka ku saabsan, faridda ah (dhibcood) iyo furu "(laamaha) of Islam. Allah ayaa sharaxaad ku saabsan tawxiid oo dhan cayn-walax, laalaadeen ilaa saabsan walaalahooda Dad idinkoo kale ahaynbaa dhaqan kulanka, weydiiyay habka ogolaansho sidaas. Sida hadalka Eebe Jannatul
"Kuwa xaqa rumeeyow, marka waxaa la idinku yidhi: 'Sadaqaysta-lapanglah ee Majliska ah', markaas ayaa Alle ka siin doonaa waasac lapangkanlah idiin" [Al-Mujaadalah: 11]
"Kuwa xaqa rumeeyow ha galina guriga oo aan gurigaaga ka hor inta weydiinaya fasax iyo kuwa degganow, oo yaa idiin khayr badan, in aad mar walba xusuusan salaamay. Haddii aadan arkin qof u ku, ka dibna ha soo galo ka hor inta aadan ogolaansho ka hesho. Iyo haddii la idinku yidhi: "dib u kaalay! ' markaas waxaad ku soo noqon doonaa. . Waxaa ka nadiifsan idiin, Eebana waa ogyahay waxaad camal falaysaan "[An-Nuur: 27-28]
Allah Subhanahu wa Jannatul ayaa sidoo kale noogu sharxay Qur'aanka ku saabsan sida loo falo. Eraygiisii.
"Markaasaa dumarkii waxay jir ah ayaa la ganaaxay (ka caadada oo ku jira) marnaba doonayay in uu guursado (mar kale) badan dembigooda tiadalah dharka iska iyagoo  oo aan lahayn (loogu talagalay) si ay u muujiyaan dahabka ah" [An-Nuur: 60].
Ay 'ha jilbanya gaaray  in ay inta kale ee jirkooda' Taasi waa si ay u sahlan tahay in la aqoonsado waa, sidaas darteed: "Nabiyow ku dheh naagihiinna, iyo gabdho, iyo naagahaaga ee Mu'miniinta ah. aan dhibay. Eebana waa dambi dhaaf badane Naxariis badane ". [Al-Ahzaab: 59].
"Yeyna kuna Garaacin Lugahooda si ay u ogaadaan in ay ku dhuuntaan dahabka." [An-Nuur: 31]
"Oo bal ma aha Samo falku inaad Gashaan Guryo ka  ka dambeeya, laakiin gartay in xoog aha Samo falku inaad dadka wanaagga fala, oo taga si guryaha ay albaabbadu". [Al-Baqarah: 189].
Iyo aayaadkiisa badan oo sidan oo kale, oo waa sidaas cad in Islaamku waa qumman yahay, wuxuu daboolayaa dhammaan dhinacyada nolosha, ma u baahan tahay in lagu daro iyo in aan la dhimay. Sida hadalka Eebe Jannatul on Quraanka.
"Waxaana kugu soo dajinay Kitaabka (Quraanka) si aad ugu sharaxdid wax walba". [An-Nahl: 89].
Sidaas darteed, ma jiro wax nin wanaagsan u yimaadda nolol aakhiro iyo sidoo kale dhibaatooyin nolosha adduunka u baahan yahay, laakiin Ilaah ayaa lagu tilmaamay in Quraanka cad ama ay tilmaam, muuqata ama dadban.
Sida hadalka Eebe Jannatul.
"Ma jiro ee waa xayawaan dhulka iyo Shimbiraha oo duusha oo garbolabo, laakiin dadyowga (sidoo kale) sida aad. Tiadalah Waxaan saaray wax ka-al Kitab. Markaas lagu soo Kulmin Dadka Xagga Eebahood". [Al-An'am: 38].
Waxaa la soo jeedinayay '' al-buugga "halkan waa Quraanka Marka dhab ahaantii loo yaqaan." Lawh Mahfuz "Sababtoo ah waxa aan si kale Allah Subhanahu wa Jannatul on Quraanka oo eraygiisa,". Macnaha : Waxaan ka soo Dejinay kepadmu Kitaabka (Al-Quraanka) si aad ugu sharaxdid wax walba "camiridda oo cad oo aan ahayn sheegay in uu ereyga". Macnaha, wax ka-al buug Waxaan aan la saaray ".
Waxaa laga yaabaa in ay jiraan dad ku weydiin: "Ma jiraan aayad Quraan ah oo qeexaya tirada socda shanta salaadood tiro kasta salaadda Cumputer-Sidee erayga Ilaah oo in lagu soo dejiyey Quraanka si ay u sharxaan wax walba, halka aan waxbana kama uu helin aayad ah oo qeexaya kasta tirada Cumputer tukashada? ".
Waxa uu ku jawaabay: Allaah ayaa sharaxay Quraanka in aan u dardaarmay in ay qaataan oo ay raacaan oo dhan ayaa aqbalay in erayadan oo lagu muujiyey Nabiga sallallaahu 'wa. Waxay ku salaysan tahay hadalka Eebe Jannatul.
"Qof kasta oo adeeca Rasuulka, wuxuuna u Adeecay Eebe" [An-Nisa: 80].
"Oo maxaan la siiyeyna Rasuul, markaas aqbalo isaga. Iyo wixii uu reebi aad markaas ka tago". [Al-Hashr: 7].
Sidaas wax walba ayaa lagu tilmaamay in ay Sunnah oo ka mid ah Nabiga sallallaahu 'wa, dhab ahaantii Quraanka waxa uu leeyahay si ay u muujiyaan kastaba. Sababtoo ah Sunnah iyo sidoo kale dajinta iyo Ilaah baa idin baray in Nabiga Shalallallahu ah 'wa. Sida ku xusan eraygiisii.
"Waxa ay ka dhigan tahay, Eebe u soo dejiyey kitaabka (Quraanka) iyo Al-xikma (Sunnah) in aad". [An-Nisa: 113].
Sidaas darteed, waxa ku xusan in Sunnah ah, dhab ah ayaa sidoo kale xusay in Quraanka.
Nabiga sallallaahu 'wa si kastaba oo dhan ma inay u sharax DIINTA
Haddii aad la dhigay iyo aaminsan yahay in waxyaabaha kor ku xusan, markaas haddii ay jiraan wax ku saabsan diinta in ka heli karto oo u dhaw in Ilaah uusan sharaxay by Nabiga sallallaahu 'wa ilaa uu ka dhintay?
Dhab ahaantii ma aha. Nebigu sallallaahu 'wa ayaa sharaxay waxyaabaha kasta isaga kaga farxisaan Diinta, labada eray, camal ama ogolaansho. Waxa uu sallallaahu 'wa lahaa in ay si toos ah u sharax ka initiative, ama jawaab su'aalaha. Mararka qaarkood, ku ah doonista Eebe, waxaa jira Baadiyaha ah u yimid Nabiga sallallaahu 'wa in aad weydiiso wax ku saabsan diinta, halka saaxiibo ah kuwaas oo had iyo jeer raaci Nabiga sallallaahu' wa ma weydiisan. Sidaa darteed saaxiibo ka heli faraxsanahay marka ay jirto Baadiyaha ah u yimaadeen inay u weydiiso Nabiga sallallaahu 'wa.
Sida cadeyn u tahay in Nabiga sallallaahu 'wa ayaa sharaxay waxa loo baahan yahay dadka oo dhan in cibaadada, mu'amalah iyo naftooda, taas oo ah hadalka Eebe Jannatul.
"Maanta ayaan kaamilmayaa aad u Diintiinna, oo lahaa ni'mat labada dhamaado igu yidhi, oo ay ii ridhai noqday Islaamka Diin". [Al-Ma'idah: 3]
Hal-abuurnimo kasta waa qasnaan ah
Haddii dhibaatadu ay ahayd qaynuun cad oo walaalkiis, markaas ogaada in qof kasta oo geysata faasiqnimo Diinta, inkastoo la sabab wanaagsan, markaas waa dhaxaltooyo, ka sokow iyagoo digression ah, waa ficil cay diinta oo Beeniyey hadalka Eebe Jannatul, taas oo macnaheedu yahay: "Anigoo maanta ayaa kaamil ah oo aad aad diinta .....". Sababtoo ah la falalkiisa, waxa uu u muuqday in la sheego in Islaamku ma u san yahay, sababtoo ah dhaqanka lagu sameeyo malo ma sawiri kartaa oo u dhaw in Ilaah iyaga ku jiro.
Waxa la yaab leh, qofna raalli nuxurka faasiqnimo, neefta iyo dabiiciga ah ee Eebe Ilaaha Qaadirka ah, ka dibna waxa uu sheegay in hadafka la leeyahay waa Ilaah u ammaanaan, si ay quduus uga Ilaah, iyo inay adeecaan hadalka Eebe Jannatul.
"Sidaas darteed waa in aan aad qabtay sokeeye waayo, Ilaah". [Al-Baqarah: 22]
Waa wax la qariibsado, in dadka samayn noocan oo kale ah een in Diinta Eebe, kuwaasina waa kuwa ku faraxsan nuxurka, oo marna ay sameeyaan culimada Salaf ah, ayaa sheegay in isagu wuxuu ahaa kii Ilaah ka dhiga, kan ammaanaa Ilaah, iyo kii hadalkayga xajiyo: "oo macnaheedu yahay: sokeeye markaas ha la qaban, Eebana", oo ku alla kii uu yahay musyabbih menyalahinya mumatstsil (dadka dhiga Ilaah kula wuxuu abuuray), ama isagoo ku eedeeyey in la koobab kale isku xirka.
Waxa la yaab leh, mar kale, waxaa jira kuwa u qabtaan faasiqnimo diinta Ilaah shakhsi oo la tixgelinayo Nabiga sallallaahu 'wa. By sidaas samaynaya waxay u Malayn inuu ahaa qofka ugu jecel Nabiga sallallaahu 'wa kaas oo isaga ammaanaa, kii aan sidaas oo kale sameeyaan ka dibna sidii iyaga isagu waa nin xaqa nacay Nabiga sallallaahu' wa, ama isagoo ku eedeeyey in ay koobab kale isku xirka sida caadiga ah ay u isticmaalaan kuwa ka gaaloobay Eebahood wuxuu faasiqnimo.
Waa wax la qariibsado, in dadka sida ayaa yiri: "waxaan u tasbiixsada Eebe iyo Rasuulkiisa". Oo faasiqnimo ayay sameeyaan, waxay si dhab ah u leeyihiin in ay u dhaqmaan kibro in Eebe iyo Rasuulkiisa. Imtithaal ayaa sheegay.
"Kuwa xaqa rumeeyow, ha ka hor, Eebe iyo Rasuulkiisa oo Dhawrsada Eebe. Runtii, Eebana waa maqle, waxaad og tihiin". [Al-Hujuraat: 1].
Halkan qorayaasha dooneyso inaad weydiiso, oo aad weydiisan kartaa -demi dhigtay in ka jawaabaysaa in aad bixiso ka yimaado niyada halkii ay ka dareen, ayaa ku jawaabay oo waafaqsan hanuunka rumaysadkiinna, ma by dayashada (-olaha).
Waa maxay fikradaada kuwa faasiqnimo ku sameeyey Diinta Eebe, in in ka raalli nuxurka, dabeecadda iyo neefta 'Allah Subhanahu wa Jannatul ama kuwa ku Gata qofka Nabiga sallallaahu' wa. Markaas waxaad ku tidhaahdaa: "waxaan u tasbiixsada Eebe iyo Nabiga?".
Ma si ka badan ayay xaq waxaa loo yaqaan pengagung Eebe iyo Nabiga, ama dadka in ay ka gilgishaan caaradda farta ah shareecada Alle, oo waxa uu yidhi: "Waxaan aaminsan nahay in ay Shareecada Alle u keenay Nabiga, ma waxaanu ku Rumayn wixii waa lagu wacdiyaa, Waxaan adeeca iyo submit amarrada iyo reebay, waxaan diido waxa aan ka jirin Shareecada, waa in aynaan noqon kibro in Eebe iyo Rasuulkiisa, Diinta Eebe ama ku odhan karaa in wax kuma jiraan wax baraya "?.
Yaa, sida in aad, ayaa in ka badan xaq u leeyihiin in loogu yeedho nin jecel iyo ammaanaa Eebe iyo Rasuulkiisa.?
Sida iska cad kooxda labaad, kuwii odhan: "Waxaan iimaan iyo waxay aaminsan yihiin waxa laynagu wacdiyey, Eebe adeeca iyo waajib ah in wixii la amray, oo aan diido waxa aan ku amartay, oo waa in aynaan ku abuurta Ilaah ama in Shareecada sameeyo faasiqnimo in Diinta Eebe ". Shaki kuma jiro in ay kuwani yihiin dadka naftooda ogaan iyo ogaan khaliqnya booska. Waxa oo ku ammaani Eebe iyo Rasuulkiisa waa, oo runta oo ay muujiyaan jacaylka ay Eebe iyo Rasuulkiisa waa.
Ma aha kooxda koowaad, kuwaas oo faasiqnimo ku sameeyey diinta Ilaah, xagga rumaysadka, iyo hadalka, ama shuqulba. Dhab ahaantii, qaab ku filan, erayadii Rasuulkii Allaah wa ay u fahmaan.
"Iska ilaali tallaabooyinka cusub xaakinka, sababtoo ah kiis kasta oo cusub waa faasiqnimo, faasiqnimo kasta waa baadida, iyo baadida kasta tagaan in cadaabta".
Kalimadiisii: "faasiqnimo kasta" waa mid guud oo dhamaystiran, oo waxay ku ogaa.
Nabiga sallallaahu 'wa in samatabbixin ogaysiiska dadweynaha of this, ogaan doonaa waxa uu xambaarsanyahay, xidhiidhaa. Waxa uu sallallaahu 'wa wuxuu ahaa ninka ugu hadalyaqaan ah, ugu naseexeeyaan dadka, ha dhihin waxa la fahamsan yahay macnaheeda marka laga reebo, si marka Nabiga sallallaahu' wa yiri: "Kullu bid'atin dhalalah", waxa uu ogaaday wixii la yidhi, fahamsan edbin doonaa macnaha, oo waxay soo baxdo ka hadal, waayo, isagu waa mid aad u kali dadkiisii.
Haddii hadalka la kulmay saddexdaa walxood, kuwaas oo: noqnoqda leh daacadnimo, ka buuxaan codkarka iyo waxgarashada, markaas hadalka ku leeyahay ma jirto xidhiidh kale oo aan ahayn macnaha uu ka kooban yahay.
Iyadoo qoraalka guud ee kor ku xusan, waa run in faasiqnimo waxa loo qaybin karaa saddex qaybood, ama shan qaybood ah?
Absolutely run ma aha. Ra'yiga culimada qaar ka mid ah oo sheegeen in ay jirto Laylatul Qadri faasiqnimo, ra'yi lama laga soocay laba wax.
First: suuragalnimada in laga reebo faasiqnimo laakiin isagu waa ka fiirsaday sida faasiqnimo.
Labaad: suuragalnimada in ay ka mid yihiin faasiqnimo, kaas oo ka mid ah sayyi'ah Dabcan (xun), laakiinse ma uu ogaan foolxumada.
Sidaas kiis kasta oo loo texgelinayaa inuu yahay Laylatul Qadri faasiqnimo, markaas jawaabta sidaasuu hore waa.
Sidaas darteed, mar dambe ma jiro jid u sameeyey khubaro si ay u sameeyaan wax ka mid ah een een sida faasiqnimo iyaga Qadri, sababtoo ah waxaan hore u leeyihiin hub awood badan oo ka mid ah Nabiga sallallaahu 'wa, kuwaas oo:
"Hal-abuurnimo kasta waa baadida"
Hubka ayaa la kama aad dhigin inuu warshad kasta, laakiin halkii ay ka timaaddaa Nabiga sallallaahu 'wa, oo wuxuu ka dhigay si kaamil ah. Sidaas ciddii haysta hubka aan lagu soo horjeeda karaa qof kasta oo la faasiqnimo ah oo oranaya sida Qadri, halka Nabiga sallallaahu 'wa ayaa sheegay: "hal-abuurnimo kasta waa baadida".
Jira inta u dhaxaysa akhristaha oo weyddiista waa: Sidee ayaad u malaynaysaa ku saabsan erayada Umar Xadiiska ka dib markii lagu amray in ay Ubay ibn Ka'b iyo Tamim Ad-Of in dadka mengimami ee Ramadan. Marka soo baxay si aad u hesho shirka ay soo urureen oo la wadaaddadooda, ayuu yiri: "Tani waa sida ugu fiican ee faasiqnimo .... iwm".
Waxa uu ku jawaabay.
First: Taasi ma jiro oo naga mid ah ka soo hor jeedaa laga yaabaa in Nabiga sallallaahu 'wa, inkastoo erayadii Abu Bakr, Umar, Cusmaan, Ali, ama ka badan erayada ay qof kale. Maxaa yeelay Eebe adkaade wuxuu leeyahay,
"Markaas kuwa ku xadgudba amarka (Rasuulka) cabsi ay noqon doontaa overwritten aflagaado ah ama overwritten cadaab daran". [An-Nuur: 63].
Imaam Axmed bin Hanbal yiri: "Maxaad ka taqaanaa, waa sumcad ?. aflagaado ah, kuwaas oo shirk laga yaabaa in haddii diiday ugu Nabiga sallallaahu 'wa ku dhici lahaa inuu reer xamarku ah, waxa ay ugu danbeyn wuu halligmi doonaa.."
Ibn 'Abbaas anhu yiri: ". Ku dhawaad dabcan aad dhagaxyo Samada ka soo tuuray, waxaan idhi: Rasuulka Alle, sallallaahu' wa sheegay, laakiin waxaa idin soo horjeeda erayadii Abu Bakr iyo Cumar."
Labaad: Waxaan aaminsanahay in Umar Radi 'anhu ka mid ah dadka qaba ixtiraam weyn u hadalka Eebe Ilaaha Qaadirka ah iyo Rasuulkiisa sallallaahu hadalka wa. Beliaupun loo yaqaan ninka waxa aasaas u ah qodobada Eebe, ee ha la yaabin haddii uu naanaysta sida qofka oo had iyo jeer ugu cuslaataan kalamullah helay. Iyo sheekooyin ka mid ah haweenka buuse joogaa, kan ku doodeen statements uu ku saabsan arrintaas oo yareysey ku qeexi (yarad) in uu ereyga Ilaah ka, taas oo macnaheedu yahay: "... aad siiyey mid ka mid ah oo maal in badan ..."  waa wax qarsoodi ah dadweynaha, sidaas darteed ma u xayiraad yarad.
Inkasta oo sheeko u baahan in la cilmi-baaris badan oo ku saabsan keshahihahnya, laakiin loogu talo galay si ay u sharxaan in Cumar wuxuu ahaa nin had iyo jeer ku salaysan qodobada Eebe, ma iyagoo guriga dhacaya.
Sidaa darteed, ma mudan tahay markii Cumar Radi 'anhu kulankii Nabiga sallallaahu' wa oo wuxuu ku yidhi ku saabsan hal-abuurka ah, "Tani waa sida ugu fiican ee faasiqnimo", faasiqnimo marka daro category erayada Nabiga sallallaahu ' Sallam wa Maxamed NNKH: "hal-abuurnimo kasta waa baadida".
Laakiin faasiqnimo in Cumar ayaa sheegay, waa in lagu rakibaa sida amma oo aanan lagu soo darin erayada Nabiga sallallaahu 'wa yahay. Ujeedadu waxay: waa kulan ee dadka doonaya in ay sameeyaan gudniinka on Taraawiixda ee Ramadan oo leh wadaad, halkaas oo ay markii hore ay sameeyeen on iyaga u gaar ah.
Inkasta oo gudniinka waa salaadda keligeed ma laha sal u ah Nabiga sallallaahu 'wa, sida ku qoran by Sayyida Aisha Radi' anha yiri: "Nebigu sallallaahu 'wa marnaba samayn Qiyamul Lail (oo ay la socdaan Ehelkeeda ah), seddex habeen oo isku xiga, markaas ayuu menghentikannnya habeenkii afaraad, oo wuxuu ku yidhi,
"Waxaan ka baqayaa in haddii Salaadda la idiin jideeyey, sedanghkan aadan awoodin in ay ka qaadan". [History of Xadiiska Al-Bukhaari iyo Muslim].
Sidaas Qiyamul Lail (salaadda habeenkii) ee Ramadan shirka waxaa ka mid ahaa Nabiga Sunnah ee sallallaahu 'wa. Laakiin waxa loogu yeero faasiqnimo by Cumar Radi anhu by la tixgelinayo in Nabiga sallallaahu 'wa ka dib markii stop ah habeenkii afaraad, dadka waxa ay sameeyaan on iyaga u gaar ah waxaa ka mid ah, qof uu leeyahay si ay u sameeyaan in shirka la dadkii badnaa. Ugu dambeyntii anhu Amirul Mumineen Umar Radi 'in uu ra'yi xaq u leedahay inaad u qaadatid la wadaad. Markaas falalka sameeyeen Umar la odhan jiray faasiqnimo, marka la barbar dhigo waxa ay sameeyaan kuwa ka hor. Laakiin dhab ahaantii ma aha faasiqnimo, sababtoo ah waxaa la sameeyo Nabiga sallallaahu 'wa.
Iyada oo sharaxaad taas, ma jirto wax sabab ah khubarada si ay u sheego fal een een sida faasiqnimo iyaga Qadri.
Waxa kale oo ka mid ah akhristayaasha oo codsaday jira: Waxaa jira waxyaabo aan weligood sameeyaan waqtiga ay Nabiga sallallaahu 'wa, laakiin waxa uu ka helay oo ku dhaqma muslimiin, sida; Dugsiyada, diyaarinta buugga, iyo sidaas. New wax sidan oo kale lagu qiimeeyo sida fiican ee ay Muslimiinta, ku dhaqma oo loo arko sida camalka wanaagsan. Haddaba sidee waxan sameeya, oo ku dhowaad isku raacsan yahay ee Muslimiinta ah, oo ay weheliso Nabiga sallallaahu 'wa: "hal-abuurnimo kasta waa baadida?".
Jawaabta: Waxaan dhihi in wax sidan oo kale dhab ahaantii ma aha faasiqnimo, laakiin iyada oo loo adeegsanayo si ay u fuliyaan amarada, halka hab ee kala duwan yihiin sida ay meel iyo marxalad. Sida ku xusan siwak ah: "waxaa loola jeedaa xukumo sida ay ujeeddo". Waxaa loola jeedaa si ay u fuliyaan amarada, sharciga ku amartay; waxay ka dhigan tahay sababta dabci aan lagu amray in, sharciga waxaa loo amrin, isagoo adeegsanayo ah falalka sharci darro ah, sharciga waa xaaraan. Si taas loo gaaro, ixsaan, haddii iyada oo loo adeegsanayo u xun loo isticmaalo, bedeli doono sharciga noqon wax xun iyo wax shar ah.
Hadalka Eebe Jannatul.
"Oo ha habaarina ilaahyo waxay caabudi oo Eebe ka soo hadhay, sababta oo ah waxay ku inkaarnaan doona Eebe Cilmi la'aan oo ka baxsan". [Al-An'am: 108].
In kastoo ilaahyo aflagaadeeyaan kuwa gaalada, iyo falalka xaq meel. Halkii, mejelek tidaha Eebaha Alamein waa fal xun oo ka soo baxa meeshan. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah falalka iyo aflagaadeeyaan ilaahyo habaari la cimrisiiyo sababta ay caayo doono Eebe, kadibna falalka caynkaas ah waxaa ka mamnuuc ah.
Waxaan ula kac ah xigtay aayaddan, maxaa yeelay, waa Aragtida ah in muujinaysaa in hab ku xukumo sida ay ujeeddada. Dugsiyada ay, shaqada sayniska iyo diyaarinta buugaagta iyo cibaaro kale oo inkastoo uu jiro wax la mid ah waxa ay ahayd in wakhtigii Nabiga sallallaahu 'wa, laakiin aan caga dhigan, laakiin macneheedu yahay. Inkasta oo hab ku xukumo sida ay ujeeddada. Sidaas darteed haddii qof dhiso dugsi loogu talagalay ujeeddada sayniska baridda waa sharci darrada ah, ka dibna dhismaha sharciga waa xaaraan. Taa waxaa ka duwan, haddii ujeeddooyinka ee waxbaridda syar'i sayniska, ka dibna waxaa la amray in ay dhismaha.
Haddii ay jirto sidoo kale waa su'aasha ah: Sidee aad jawaab ugu Nabiga sallallaahu 'wa.
"Yaa bilaabay siiyo tusaalooyin wanaagsan ku Islam ka dibna uu helay abaal marin camalkiisa iyo abaalmariyo kuwa raaca (shabahaan) dambiga ..".
"Sanna" halkan waxaa loola jeedaa: sameeyo ama la qabto.
Laga soo bilaabo halkan, waxaa la fahamsan yahay in macnaha "Sanna" waa: dejiyaan (DO), taa micnaheedu ma aha samaynta (hold) sunnah ah. Sidaas micnaha erayada uu: "Man Sanna Fil Islaami Sunnatan Hasanan", kuwaas oo: "Ciddii fuliyo sunna wanaagsan", ma sameeyo ama u qabtaan, maxaa yeelay, sida waa ka mamnuuc. ku salaysan erayada uu: "Kullu dhalaalah bid'atin".
ERAYADA in la buuxiyo cibaada
Maskaxda ku hay in mutaba'ah (raaco Nabiga sallallaahu Laahu wa Sallam) ka lahaa aan lagu gaari haddii hay'ad samafal oo la sameeyay iyadoo la raacayo Shareecada Islaamka ee lix xaaladood.
First. Sababtoo ah.
Haddii qof cibaado inay Ilaah, sababtoo ah in aan waa disyari'atkan, Caabudaysaan waa bid'ah iyo lama aqbalin (diiday). Tusaale: Waxaa jiraan dad ku sameeyo salaadda ee tahajud habeenkii toddoba iyo labaatan bilood ee Rajab, oo ku marmarsiyoonaya in habeenkaas ahayd habeen ee Mi'raj Nabiga sallallaahu 'wa (sara kiciyey si ay samada). Tahajud Salah waa cibaadada, laakiin maxaa yeelay, waxaa la xidhiidha sababta faasiqnimo noqdo. Sababta oo ah cibaadada ahayd mid ku salaysan sababo in aan ku qeexan Shareecada. Shuruudan ka raaedo: cibaadada waa in ay waafaqsan Shareecada Islaamka ee Jidka - Waa muhiim, sababta oo ah si ay u ogaadaan nooca qaar ka mid ah hay'ad samafal oo ka mid ah waxaa loo arkaa Sunnah ah, laakiin dhab ahaantii waa faasiqnimo.
Jeedaa: cibaadada waa in ay waafaqsan Shareecada Islaamka ee noociisa ah. Haddii aan, ka dibna waxa aan la aqbali karin. Tusaale: laayay faras allabarigii ahayd mid khaldan, sababtoo ah waxaa ku xad-qodobo ka mid ah Shareecada Islaamka ee noociisa ah. Taasoo laga yaabo in la sameeyo allabariga waa geel, lo 'iyo ari.
Saddexaad. Heerarka (Numbers).
Haddii uu qof ku darayaa salaadda tirada Cumputer, taas oo uu sheegay in ay la amray, markaas salaada waa faasiqnimo iyo aan la aqbali karin, sababtoo ah ma aysan isaga waafaqsanaynina u leh qodobbada shareecada in tirada tirada rakaatnya. Sidaas, haddii ay jiraan dad ku tukanayay shan rak'ahs Zhuhur, tusaale ahaan, ka dibna uu salaadda run ma aha.
Tan afraad. Kaifiyah (Sidee).
Haddii qof maydka jidkii gacmaha iyo wajiga lagu dhaqo, ma aha wudhunya sharci ah, maxaa yeelay, ma aha iyada oo la raacayo hab shareecada qoray ah.
Haddii ay jiraan dad la gowracay Xayawaanka Nicmoolayda Maalintii ugu horraysay ee Dhul Hijjah, ma aha sharci ah, sababta oo ah waqti ma aha in uu fuliyo sida ay diinta Islaamka.
Waxaan maqlay ayaan in ay jiraan dad bertaqarrub Eebe ee Ramadan ay gawrici orgi. Hay'adaha sida tani waa faasiqnimo, sababta oo ah allabari lahayn waxaa loogu talagalay in bertaqarrub in Ilaah laga reebo sida allabari, Xajka iyo ganaax akikah. La gowraco ee bisha Ramadaan la i'tikad abaal allabaryada caynkaas ah sida Eid al-Adha waa faasiqnimo. Haddii la laayo oo kaliya in ay cunaan hilibka, okay.
Lixaad. Place The.
Ka soo qaad waxaa jira dad meelo kale oo badan masaajidda beri'tikaf, ma aha i'tikafnya sharci ah. Waayo, meesha i'tikaf kaliya ee masjidka. Sidoo kale, u malaynayaa waxaa jiray qof dumar ah oo ku saabsan in beri'tikaf in mushalla guriga, ma aha i'tikafnya sharci ah, maxaa yeelay, meelihii ha u hoggaansamaan qodobada shareecada Tusaale kale: Qofka Baytja samaynayo meel ka baxsan masjidka Xaramka sabab ah in in ee hore u buux dhaafay, tahawafnya baadil, maxaa yeelay, meeshaasu waa in House samaynaya Baytja ah, sida Eebe adkaade,
"Oo guriga aan quduus uga dhigo waxaa loogu talagalay dadka thawaf". [Al-Hajj: 26].
Dhammaystirka ka sharaxaad kor ku xusan, caabudo in uusan ka mid ah qof taqi samafalka marka laga reebo haddii ay la kulanto laba xaaladaha, kuwaas oo:
Markaasuu Mutaba'ah aan la gaari haddii lix xaaladood oo la soo tilmaamay hore.
Writer kula taliyey kuwa murgiyey tijaabooyin faasiqnimo, kaas oo laga yaabaa in ay sabab wanaagsan oo doonaya inuu wanaag, haddii aad dhabtii doonaysid wanaagsan oo ka mid ah -demi Eebe, ma jirto wado ka wanaagsan yahay jidka anhum ku Salaf (jiilka ka horreeyay) Radi '.
Xusana Eebe lamase Sunnah Rasuulka sallallaahu 'wa, raac raad ee Salaf kuwa dhowrsada, iyo u aragto haddii ay yeeli doonaan aad.?
Oo annaguna waxaannu kugu odhan, hubaal inaad ka heli doonto inta badan dadka jecel in ay ka shaqeeyaan amma ka warwareegeysey iyo caajis inay sameeyaan waxyaalaha karin ayaa bayaan loo baray iyo disunnahkan. Haddii ay dhameystirtay faasiqnimo ah, ay la kulmi lahaa Sunnah la aasaasay engggan dareen iyo caajis. Waxaa oo dhan waa saameynta ay faasiqnimo ka dhanka wadnaha ah.
Bidcada, saameyn weyn ku yeeshaan beerka oo waa mid aad u halis ah in diinta. Ma jiro faasiqnimo in Diinta Eebe, laakiin waxay sidoo kale leeyihiin saaro sunnada siman ama ka badan isaga, sida waxaa loogu muujiyey by a culimada Salaf.
Si kastaba ha ahaatee, haddii qof uu dareensan yahay in uu yahay laf ah oo aan gaare ah Shareecada, waxa lagu gaari doona waxaa si kaamil cabsi, soo gudbinta, xagga addeecidda iyo cibaadada Eebaha oo kaamil ah alamien iyo Ittiba ah '(Ka qaybqaadasho) si Imamul Muttaqin, Sayyidu Mursalin, Nabi Muxammed sallallaahu' wa.
Qoraaga u sheegay walaalaha Muslimiinta oo ka fiirsan labada qeyb ka mid ah een, kuwaas oo labaduba la nuxurka, neefta ka farxiyey 'iyo dabeecadda Ilaah, ama ku faraxsanahay shakhsi ahaaneed iyo ammaanida Nabiga sallallaahu' wa, ha ka cabsan Eebe kana dheeraadaan waxyaabo la mid ah. Beramalllah la daacadda iyo ku salaysan sunnada, kama warwareego iyo faasiqnimo; sida uu sheegay waxa Ilaah ka raalli noqdo, ma waxa aad u jeclaa laakiin Ibliiska hor. Oo iyagu ha soo bixiyo waxa lagu gaari karaa in Quluubtooda, foomka badbaadada, nolosha, nabad, farxad iyo Nuur weyn dareenka.
Eebe naga dhigo sida cicerone oo uu tilmaamo iyo hoggaamiyayaaashii ka soo wanaagsan, dagaalami isagoo qalbiyadiinna ka dherginaya iimaanka iyo sayniska, samaynta sayniska in aan barako iyo ma musiibada. Sidoo kale na hanuunin Eebe jidka addoomihiisa ah kuwa rumeeyey, oo inoo samee oo ay ku jiraan Saints uu qaybta iyo koox nasiib.
Salaadda iyo salaanta laga yaabaa in weli loo xilsaaray in ay Nabiga Ilaah Waxaan, Muhammad, in qoyskiisa iyo saaxiibbadiis.
[Guuriyeen ka kitaabka Al-Ibdaa 'fi Kamaalis Syar'i Khatharil Ibtidaa wa', edition oo kaamil ah Indonesia ee Islaamka iyo Khatarta ah Bid'ah, shuqullada Sheikh Muhammad bin Al-'Utsaimin Sholeh, MZ Masykur Ahmad turjumaan, publisher alqaacidana waxa Foundation, ee AHN - Jabaar]
Posted by needsjobslowongankerja at 9:38 PM